WhatsApp ichaburitsa hombe kuvandudza yeIOS munguva pfupi | IPhone nhau
Kana tichitaura nezveWhatsApp tinogona kutaura kuti tinoifarira zvakanyanya kana zvishoma, asi pane chinhu chimwe chatisingakwanise kuramba: ndiyo inonyanya kushandiswa kutumira mameseji pasi. Vamwe vanogona kuyedza kuratidza uye kusashandisa iko kunyorera, asi chinhu chakajairika ndechekuti iko kutumira mameseji kunowanikwa neFacebook kunoiswa pane chero smartphone. Chii chatove chinokwikwidzana (icho kana) chiri chekuti ndiyo yakanyanya kunaka mameseji app. Uye ndezvekuti semuenzaniso Teregiramu inopa akawanda anobatsira mabasa ayo yaisingapi WhatsApp. Asi izvo zvinogona kuchinja mune ramangwana kugadzirisa.
Iyo inotevera vhezheni ichaburitswa ichave WhatsApp 2.16.7 uye inosanganisira mamwe nhau dzinonakidza. Kwete, hapazovi nemabhoti akaita seTeregiramu kana mavhidhiyo kufona achaitirwa munhu wese, asi isu tinotanga kunakidzwa nemifananidzo inofamba, kunyangwe iine nuances (izvo zvisingatishamise mune iyo WhatsApp). Isu tinokuudza zvese zvichauya zvinotevera.
Nhau dzinosvika muWhatsApp 2.16.7
Shanduro dzese dzinozovandudzwa. Mune mawonero angu, izvi zvichadaro nekuti ivo vanosanganisira mabasa anoda mitsara mitsva yezvinyorwa.
Nyowani mushandisi interface (UI) ye WhatsApp / Zvirongwa / Ruzivo uye rubatsiro.
Kugadziridzwa kweWhatsApp "matema".
Kugadziridzwa kwekukwirisa vokukurukura paunenge uchigadzira boka idzva kana rondedzero
Kugadziridzwa kwemateerera anotsvedza.
Kugadziridzwa kwe zvinyorwa.
Kugadziridzwa kwe vhidhiyo mafoni (mune bvunzo).
GIF kutsigira. Iyo yakadzikira panguva ino ndeyekuti haigone kutumirwa kubva kunodzosera, asi vanogona:
Tumira zvinongedzo zveGIF uye WhatsApp inozvichengeta semufananidzo.
Otomatiki GIF kutamba, kana tichida.
Mikana yekuchengetedza maGIF semufananidzo uchiri.
GIFs ichave yakanyorwa.
Tsigiro yePeek & Pop.
Mune ramangwana, maGIF anogona kutumirwa uye kutariswa kubva kunyorera.
Support for vatori vechikamu kwenguva pfupi mumapoka, izvo zvichatibvumidza kuti tiwedzere mutsva anotora chikamu kwenguva yakati. Izvo zvisiri zvachose zvakajeka ndezve zvichaitika kana kuti mushandisi wenguva pfupi achadzingwa sei kunze kwekutaura.
Nyowani ficha yekuratidza stopwatch uchidzosera nhoroondo yekutaura.
Kuchavapo mifananidzo mitsva.
Kuvandudzwa kwekuchengetedzwa kwedata remushandisi.
Kuvandudzwa kwemukati, iyo inosanganisira mamwe muizwi rekudaidza UI.
Registry basa kugadzirisa. Iri basa riri mukuyedza uye kuvanzwa sezvo kufona kwenzwi kuripo.
Sarudzo sarudza mitezo yakawanda yekumaka sekuverenga kana kuidzima Zvese panguva imwe chete ..
Kugoneka kwe ona kuti ndedzipi nhengo dziri kushandira muboka of WhatsApp.
Yakagadziridzwa chikamu chehurukuro.
Peek & Pop zviito zvemamwe mameseji (pamwe).
Kugona kupindura zvakananga kuGIF.
Kugadziridzwa kwemashoko aunofarira.
Unyanzvi hwe chengetedza zvitambi.
Mapoka eruzhinji kwatinogona kupinda kubva kunongedzo.
Kuvandudza kwekukurumidza kupindura.
Kuvandudzwa kwekutarisa QR kodhi dzevamwe vashandisi.
Kugoneka kwe ramba uchiteerera odhiyo kunyangwe tikabuda paWhatsApp.
Mikana yekukoka vamwe kuti vaedze WhatsApp kubva kumenyu nyowani.
Zvinonzi WhatsApp inenge ichishanda pane imwe nzira isingazivikanwe "yekutaurirana nzira", saka tichafanirwa kungwarira. Kana vakatora nguva imwe chete yekuisa mamwe mabasa, zvicharamba zvichititora kuti tione kuti pfungwa iyi ndeyei.
Kugadzikana kugadzirisa uye kugadzirisa bug.
Uye kutsigirwa kweApple Watch? Zvakanaka, hazvioneke chero nguva. Kubva zuva rekupedzisira 1, Apple haichatsigire asiri emuno maapplication eOSOS, saka tinogona kufunga kuti rutsigiro rwave pedyo. Chinhu chakashata ndechekuti WhatsApp haisati yazvipira kuvhura chero chinhu cheApple Watch, saka zvingangoita kuti ichaenderera sepakutanga, pasina chishandiso chewachi yeapuro. Zvakare, kana isu tichifunga izvo zvinoita sekunge izvozvi ivo vari kutarisa kune vhidhiyo kufona ... ini ndinongoti ivo Apple Vatariri varidzi vachatofanira kuva nemoyo murefu zvishoma.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » WhatsApp ichakurumidza kuburitsa huru yekuvandudza inosanganisira kutsigira maGIF. Tinokuudza izvi uye nedzimwe nhau
Kwayedza ndapota… Maita basa
Vachada mazana maviri ekuvandudzwa kweizvozvo zvese
Apple inotangisa yechipiri yeruzhinji beta yeIOS 9.3.3 uye OS X 10.11.6